किन हुन्छ युरिक एसिड ?? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपायहरु जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
किन हुन्छ युरिक एसिड ?? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपायहरु जान्नुहोस्
युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ । युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो ।
यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ । यसले जोर्नीहरुमा अत्याधिक दुखाइ गराउँछ । रगतमा युरिक एसिड बन्ने र युरिक एसिड पिसाबबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियामा गडबडी भयो भने रगतमा पर्याप्त मात्रामा युरिक एसिड घुल्न पाउँदैन र विस्तारै गाउटको रुप लिन्छ । एउटा स्वस्थ मानिसमा युरिक एसिडको मात्रा ६ दशमलब ८ एमजी रडिएल हुनुपर्छ।
युरिक एसिड बढी देखिए पनि जोर्नीको दुखाइ नहुन सक्छ । यस्ता व्यक्तिलाई गाउट नभएर ‘हाइपरयुरेसिमिया’ भएको हुन सक्छ । त्यसले जोर्नीमा असर गर्दैन ।
जसलाई युरिक एसिड भएकै कारण जोर्नी (खुट्टाको बुढी औँला र आसपास) मा दुख्छ, त्यो गाउट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। युरिक एसिडबाट हुने बाथरोग नै गाउट हो । यो वंशाणुगत समस्या पनि हुन्छ ।
किन हुन्छ युरिक एसिड ?
शरीरभित्र पिउरिन भन्ने प्रोटिन टुक्रिएर युरिक एसिड उत्पादन हुन्छ । सामान्यतः ३ देखि ७ मिलिग्राम/डेसिलिटरसम्मको युरिक एसिड नर्मल मानिन्छ । जब युरिक एसिडको मात्रा ७ भन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई युरिक एसिड बढेको भनिन्छ ।
यसरी युरिक एसिड बढेपछि सामान्यतः खुट्टाको बुढीऔँलाको छेउमा अचानक दुख्ने तथा सुन्निने अवस्था आउँछ । राति सुत्ने वेलामा सामान्य रहेको मानिस बिहान उठ्दा नाटकीय रूपमा दुख्ने र सुन्निने भई खुट्टा टेक्न गाह्रो हुन्छ । यसका साथै युरिक एसिड लागेमा कुर्कुच्चा, घुँडा, औँला र कुहिनो अकस्मात् दुख्ने गर्छ । यस्तो समस्या जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई पनि लाग्न सक्छ ।
शरीरभित्रको युरिक एसिड पगाल्ने इन्जायमको कमीका कारण संक्रमण भई ७० प्रतिशतलाई यस्तो समस्या हुने गर्छ । कतिपयमा खानामा प्रोटिन बढी भएर वा वंशाणुगत कारणले पनि लाग्ने गर्छ । युरिक एसिडको लक्षण देखिएमा रगतमा युरिक एसिडको मात्रा परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । यद्यपि, लक्षणबारे थाहा नभएमा नियमित रगत जाँच गर्दा राम्रो हुन्छ ।
दुखेको अवस्थामा सुन्निने समस्या भएमा जथाभावी रूपमा पेनकिलर प्रयोग गर्नुहुँदैन । यस्ता औषधिको प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा चिकित्सकको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ । यस्ता औषधि सामान्यतया सातदेखि १० दिनसम्म प्रयोग गर्दा हुन्छ ।
युरिक एसिडको मात्रा अत्यधिक बढी भएमा, युरिक एसिडका कणहरू मासु तथा जोर्नीमा जम्मा भएको अवस्थामा यस्तो समस्या घटाउन चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ । सामान्यतया यस्तो औषधि ३ देखि ६ महिनासम्म सेवन गर्नुपर्छ । युरिक एसिडबाट ग्रसित व्यक्तिले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । किनकि, पानीले युरिक एसिडलाई पिसाबका माध्यमबाट हटाउने काम गर्छ ।
कसलाई हुन्छ युरिक एसिड ?
– जो अस्वस्थ्यकर खाना खान्छन् तर, शारीरिक श्रम गर्दैनन् ।
– वंशानुगत रुपमा पनि दोस्रो पुस्तामा यो रोग देखापर्न सक्छ ।
– जाँडरक्सी र धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नेहरु ।
– रगत पातलो बनाउने औषधी, उच्च रक्तचापको औषधी सेवन गरिरहेकाहरु ।
– खुट्टाको बुढी औँला र आसपासका जोर्नीहरु सुन्निनु।
– जोर्नी राति बढी दुख्नु।
– दुखाइ सहनै नसक्ने हुनु।
– लामो सयम युरिक एसिडको समस्या भएकालाई घुँडा, कुइनो लगायतका जोर्नीहरुमा पनि दुख्नु।
– ज्वरो आउनु, आदि।
कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
– पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने, जसले बढी भन्दा बढी युरिक एसिड पिसाबको माध्यामबाट बाहिर निस्कन्छ ।
– खानपानमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ । खासगरी प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन ।
– रातो मासु, कलेजो, रक्सी, गेडागुडी जस्ता खानेकुराले युरिक एसिडको जोखिम बढाउँछ ।
– हरेक दिन खाने भोजनमा कम्तीमा ५ सय ग्राम भिटामिन-सि जरुर लिनुहोस् ।
– नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । स्वथ्य खानपान र जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।
करिब एक किलो तौलको काँचो मेवालाई राम्ररी पखालौ । अब त्यसलाई बोक्रासमेत सानो सानो टुक्रामा विभाजित गरौ । अब यसलाई एउटा भाडोमा हालेर त्यसमा तीन किलो पानी मिसाएर त्यसमा पाच प्याकेट ग्रीन टी मिसाएर करिब १५ मिनेट चिया झै उमालौ र छानौ ।
अब अन्दाजी ५ , ६ गिलास सहितको यो औषधी तयार भयो । यसलाई १४ दिनसम्म लगातार पिएको खण्डमा तपाईको शरीरमा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखिन सक्छ । त्यतिमात्र हैन, १४ दिन पश्चात्त जब तपाईको रिपोर्ट सामान्य आउँछ, त्यसपछि सातामा एक दिन यसको सेवनले युरिक एसिडको समस्या हटेर जान्छ ।
यस्ता छन्, युरिक एसिड बढेकाले खान हुने र खान नहुने खानेकुराहरु
क) खान नहुने
– माछाहरु, प्राउन, लोवस्टर
– जाँड, रक्सी
– रातो मासु (खसी, राँगो), भित्री मासु (कलेजो, मुटु, मिर्गौला, गिदी)
ख) प्रशस्त मात्रामा खान हुने
– गाजर, काक्रो
– चामल, गहुँ, मकै, आलु, पाउरोटी, चिनी
– हरियो सागपात (सिमी, बोडी बाहेक)
ग) कम मात्रामा खान हुने
– दाल तथा गेडागुडीहरु
– कुरिलो, काउली, पालुङ्गो, गोलभेडा, च्याउ
– काजु, ओखर, पेस्ता, बदाम
– दूध र दूधबाट बनेका परिकारहरु
– सेतो मासु (कुखुरा, हाँस तथा अन्य चराचुरुङ्गीहरुको मासु)
युरिक एसिडको मात्रा बढ्ने कारण
थुप्रै कारणले शरीरमा युरिक एसिडको स्तर बढ्ने गर्न सक्छ । त्यस मध्ये वंशानुगत कारण देखि उच्च रक्तचाप, मोटोपन, अनियन्त्रित खानपान, रक्सीको सेवन, पिसाब बढी लगाउने औषधिको प्रयोग जस्ता थुप्रै कारणले असर पर्न सक्दछ ।
मदिराको सेवन प्राय धेरैले गर्ने र ती व्यक्तिहरुमा उच्च रक्तचाप, मोटोपन, पिसाब गराउने औषधिको सेवन गर्नु पर्ने बाध्यता जस्ता विभिन्न समस्या एकैपल्ट देखा पर्नसक्ने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुले उच्च सतर्कता नअपनाएका खण्डमा युरिक एसिडको स्तर बढेर त्यसबाट हुनसक्ने स्वास्थ्यका लागि सबै नकारात्मक प्रभाव ब्यहोर्नु पर्ने अनिवार्य हुन्छ ।
विभिन्न अध्ययनले शरीरमा यूरिक एसिडको मात्रा बढी हुनुका कारण फरक–फरक देखाएका छन् । पहिलो हो युरिक एसिड सामान्य भन्दा बढी शरीरमा उत्पादन हुनु । दोस्रो, मृगौलाबाट पिसाब भएर शरीरबाट निस्कनु पर्ने मात्रामा कमी हुनु र फलस्वरुप रगतमा युरिक एसिडको स्तर उच्च हुनु ।
तेस्रो, मिश्रित कारण भनेको भोजनमा युरिक एसिड बन्ने कुरोको औधी सेवन गर्नु, रक्सीको सेवन धेरै गर्नु, लामो समयसम्म भोको बस्नु हो ।
Topics #युरिक एसिड #युरिक एसिड कसरी नियन्त्रण
Don't Miss it चिन्ताले चितामा पुर्या‍उँछ, के तपाई पनि बढी चिन्ता लिनु हुन्छ ? चिन्ताले निम्ताउने समस्या, यस्ता छन्
Up Next पुदिना स्वादिलो अचारमा मात्र होइन, यसले हाम्रो स्वस्थ्यमा पनि स्वादिलो फाइदा पुर्याउछ जान्नुहोस्
4 days ago mygyanbigyan
तपाईको कतै पिसाब थाम्ने बानी त छैन ? यस्तो खतरनाक रोग लान सक्छ, सावधान !
जब तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ, तब गरिहाल्नुपर्छ– फेरि स्वास्थ्यको ख्याल पनि त गर्नुपर्यो, त्यसैले यो कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ। पिसाब…
घरपालुवा कुकुर रातमा भुक्नुको कारण यस्तो छ एकचाेटि अवस्य पढ्नुहाेस् ।
कुकुर किन रातमा सधै भुक्ने गर्दछ ? सानो कुरा सुन्ने बित्तिकै कुकुर भुकी हाल्ने गर्दछ । हामीले यो कुरामा ध्यान…
के गर्ने बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउन ? जानिराखाैँ
हामी चाहन्छौं, आफ्ना बच्चा स्वस्थ होस् । तन्दुरुस्त होस् । तगडा होस् । बलियो होस् । फूर्तिलो होस् । सधै…
असफलता सम्बन्धि जान्नै पर्ने केहि प्रसिद्द भनाइहरू
असफल हुनु भनेकाे सबै कुराकाे अन्त्य हुनु हाेइन, याे त एक नयाँ कुरा सिक्न पाउने अवसर हाे । यदि तपाइ…
चिन्ताले चितामा पुर्या‍उँछ, के तपाई पनि बढी चिन्ता लिनु हुन्छ ? चिन्ताले निम्ताउने समस्या, यस्ता छन्
चिन्ता र तनाव लिइरहने व्यक्तिको हड्डीमा खनिजकोे मात्रा घट्न जान्छ । निरन्तर चिन्ता लिने व्यक्ति जीउ दुख्ने समस्याबाट आक्रान्त हुँदै…
मौसम अनुसारका के–के खानेकुराहरु खाँदा स्वास्थ्यमा फाईदा हुन्छ ? वर्षा ऋतु (असारदेखि भदौ )
यति बेला नेपालमा मध्य गर्मी छ । गर्मीयाममा खानेकुरामा निकै सचेत हुनुपर्छ । विशेषगरी राति खाने खानामा बढी ध्यान दिनुपर्छ,…
सफल जीवनका ७ महान भनाइहरू – भिडियाेसहित
१. पानी परेकाे बेलामा अरू चराले सुरक्षित वासस्थान खाेज्छन, तर चिलले बादल माथी उडेर पानीकाे बेवास्ता गर्छ । परिस्थिति एकै…
गाईको घिउ खादा हुने फाइदाहरु, यस्ता छन्